Umhla My Pet » Safety ilungu Eyona Top
ukhuseleko intanethi lisoloko phambili iingqondo zethu, ngoko sifuna kukukhumbuza zonke senza ntoni ukugcina ekhuselekileyo amalungu ethu ukuqinisekisa ukuba sele ezibophelele ekuboneleleni kuwe kunokwenzeka namava ikhuselekileyo ukuthandana online.
Nantsi into esimele siyenze…
Tyala kubugcisa anti-scammer kwishishini-elikhokelayo
ubuchule Scammer kungxamele phambili yaye kusiba nzima ukuzibona. Kodwa siza sisenza konke okusemandleni ethu ukuze bemke.
Besisoloko usebenzisa iteknoloji Scamalytics anti-scammer ngenxa 2 iminyaka ngoku. Idatha izabelo Isixhobo scammer kulo lonke ushishino ukuthandana intanethi kwaye inceda iqela lethu labahloli abaqeqeshiweyo scammers ndawo uze uyisuse DateMyPet.com phambi kokubakokuba luchaphazela amalungu ethu. Scamalytics kwakhona auto-ibhaqa scammers kwaye lisusa bots, kwakunye nokubonelela iqela lethu kunye 'phantsi ukwesona' ngolwazi olungafumaneki nokubonwa ngeliso.
Bexhotyiswe olu lwazi, iqela lethu inkonzo yabathengi zibekwe ngcono ukuba bayibone iintsingiselo scammer kwaye susa kubo ngokukhawuleza.
ngoqeqesho olungapheliyo ukuze amaqela ethu enkonzo
Thina omnye iinkampani kuphela kushishino neyakhe iqela bethu-endlwini yenkonzo, kunye namaqela enkxaso ongelolungu ukulungiselela ukumodareyitha abathengi. Iqela lethu 60 umsebenzi 24 iiyure ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki, 365 iintsuku ngonyaka ukubonelela okwixesha--izowuni unonophelo kumalungu ethu ehlabathini lonke.
Siyavuma umthengi rhoqo eqhubekayo ingqalelo uqeqesho, benenjongo iziphucule ngokuqhubayo iinkonzo zethu kunye nokuqinisekisa ukhuseleko zamalungu ethu.
amaxesha ukumodareyithwa Fast
Bethu abaqeqeshiweyo yokumodareyitha screen yonke umxholo umsebenzisi-eveliswa ukuqinisekisa profiles angenisiweyo lokwenene. Oku kuquka imifanekiso kuhlalutywa, profiles, kwidayari, iividiyo kunye nemiyalezo zabucala yokuqala ukuqinisekisa ukuba imiqathango nobulungu obudibene kwisayithi okanye uthungelwano.
Ukugcina amaxesha ukumodareyithwa phantsi ubuninzi 10 umzuzu ekujoliswe, Iqela lethu kumodareyithwa ukubonakala ecacileyo amaxesha imvume ukuze bakwazi esweni intsebenzo yabo yonke shift yabo. amaxesha zokumodareyitha ezikhoyo ngokunje kwi nocwangco 7.5 imizuzu!
abaqeqeshi Dating inika inkxaso neengcebiso
Kwakunye nokubonelela zabaxhasi ophezulu esemgangathweni kubo bonke abasebenzisi zethu, Iqela lethu nabakwasebenza abaqeqeshi ukuthandana, ukunceda amalungu basokolayo kunye nomba yobugcisa okanye abo daters abanamava online ukufumana okuninzi yamava ukuthandana.
Iqela zabaxhasi ucebise ukuba ukwenza njani inkangeleko siyakwazi iziphumo ezintle, ukuhlala ngendlela ekhuselekileyo ukuba nokulindeleyo xa uthandana online.